I-china abakhiqizi be-TCD Cyclo Vortex Pump (Repalce TC) nabaphakeli | damei kingmech futha
Amandla: 3-1400m3 / h
Izinto: Cr27, Cr28, CD4MCu,
Amaphampu we-TCD aklanyelwe ngqo ukusetshenziswa okuqhubekayo kuzinhlelo zokusebenza zohlobo oluludaka olunezinhlayiya ezibucayi noma ezinkulu. Lolu hlu lwamaphampu e-vortex luyakwazi ukuphatha izinhlayiya ezinkulu nezithambile kakhulu, ikakhulukazi lapho ukonakala kwezinhlayiyana kukhathaza khona. Amaphrofayli amakhulu wangaphakathi wevolumu, ahlanganiswe nomklamo ovulekile wempepho ovulekile, wehlisa ukuxhumana kwezinhlayiyana futhi ukhawulele ukuvimba okungaba khona.
Idizayini nezici ezihlukile
1. Idizayini yensimbi engamenyezelwanga yezingxenye zokuphela kwamanzi ilungele ukucushwa kokuklanywa mpo kwe-horizontaland mpo.
2. Umklamo oyingqayizivele wempepho ohlehlisiwe ubeka i-vortex yangaphakathi, edlulisela amandla kulokho okumpontshwa khona. Lokhu kudluliswa kwamandla "okuthambile" kunciphisa inani lokucekelwa phansi kwezinhlayiyana kakhulu uma kuqhathaniswa namaphampu ajwayelekile.
3. Izikhala nezindawo ezilingana ngokulinganayo zinquma usayizi oyizinhlayiyana omkhulu ipompo engalisingatha ekuvimbeleni ukuvimba okungaba khona okungavela lapho kupompa izinhlayiya ezinkulu.
4. Umklamo omkhulu wobukhulu bezinhlamvu unciphisa ama-velocities aqhubeke anciphise ukuwohloka nokuwohloka kwezinhlayiyana.
5. Imihlangano eqinile yokuthwala, equkethe ama-taper roller asindayo, ubuncane be-shaft overhang kanye nemishayo yobubanzi obukhulu efaka isandla ekusebenzeni okungenazinkinga kokulungiselela okuqondile nokuqondile.
6. Umhlangano oyingqayizivele "-10" (udeshi 10) wekhava yokuphela equkethe i-V-Seals, amasongo ama-piston aphindwe kabili ne-flinger yangaphandle enama-labyrinths agcotshiswe ngamafutha kuyinto ejwayelekile emihlanganweni evundlile yokuthwala.
7. Ukutholakala kwezinhlelo zokuphotha eziqondile mpo kubude obujwayelekile nobushaft buyahluka ngokuya ngamabanga empompo ajwayelekile eWarmanVSD (SP) neVSDR (SPR).
Imisebenzi yokudluliswa kwekhabhoni
Ukuthuthwa kwendle kanye nokuSebenza
Imisebenzi Yesheya Ephansi
Langaphambilini I-SSD Submersible Pump
Olandelayo: VFD Kuqondile Froth Pump (Repalce AF)
I-API610 OH4 Pump RCD Model
I-API610 BB5 (DRM) Pump
I-DGD Dredge Pump yeSanti neGravel Pump (Ukuphendula ...